प्रधानन्यायाधीश मिश्रलाई जोशीले नै गरे स्वागत ! - Everest Dainik - News from Nepal
प्रधानन्यायाधीश मिश्रलाई जोशीले नै गरे स्वागत !
काठमाडौं, भदौ २६ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा ओमप्रकाश मिश्र नियुक्त भएका छन् । सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेसँगै उनी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ खाएपछि सोमबारै साँझ पौने ७ बजे उनले पदबहाली गरेका छन् ।
शीतलनिवासमा शपथ खाएपछि पदबहाली गर्न सर्वोच्च पुग्दा मिश्रलाई स्वागत गर्नेको पहिलो पंक्तिमा दीपकराज जोशी थिए । जोशी उनै न्यायाधीश हुन् जसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरिदिएको थियो । जोशीलाई अस्वीकार गरेपछि नै मिश्र प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो खुलेको थियो ।
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश मिश्रलाई स्वागत गर्न बसेका जोशी गम्भीर मुद्रामा देखिन्थे । प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएपछि जोशी २० साउनपछि सोमबार नै पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएका हुन् ।
न्यायाधीश जोशीले मिश्रको गलामा माला लगाइदिए । हात फैलाएर अंकमाल गर्दै भने, ‘श्रीमान् बधाई छ ।’ जोशी मिश्रको कार्यकक्षसम्मै पनि पुगे । पत्रकार सम्मेलनभर मिश्रको देब्रेपट्टि बसिरहे । आधा घन्टाको पत्रकार सम्मेलनपछि दुईजना छुट्टिए ।
याे पनि पढ्नुस अयोग्य ठहर गरिएका जोशी प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस
मिश्र यसरी भए प्रधानन्यायाधीश, चार महिना कार्यकाल
१८ साउनमा संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशका लागि दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गरेपछि ओमप्रकाश मिश्रको भाग्य खुल्यो । संवैधानिक परिषद्ले जोशीसँगै मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर राणाको नाम पनि सिफारिस गरेको थियो । जोशी अस्वीकृत भएपछि वरिष्ठताका आधारमा ७ भदौमा मिश्रको नाम प्रस्ताव गर्यो ।
याे पनि पढ्नुस प्रधानन्यायाधीशमा जोशी अस्वीकृत भएपछि कांग्रेसद्वारा बैठक बहिष्कार
उनी सुनुवाइ समितिबाट पनि स्वीकृत भई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए । ६५ वर्ष उमेर हदका कारण मिश्र १८ पुस ०७५ सम्म अर्थात् चार महिना मात्रै प्रधानन्यायाधीश पदमा रहनेछन् ।उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुपूर्व पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश थिए । मिश्रले कानुन मन्त्रालयका शाखा अधिकृतबाट १० कात्तिक ०३८ बाट सेवा सुरु गरेका थिए । नायँ पत्रिकामा खबर छ ।
ट्याग्स: Deepakraj joshi, High Court, Omprkash Mishra